Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Carlos Vinicius Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị nke Carlos Vinicius na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye, Childrenmụaka, Wortọ Net, Ndụ na Ndụ Nke Onwe.
N'okwu doro anya, anyị na-ewetara gị akụkọ ndụ zuru oke nke Carlos Vinicius. Anyị na-amalite site n'oge nwata ya ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ na-agụ gị, nke a bụ oge ndụ ya na mbilite - ezi nchịkọta nke Bio ya.
Ee, onye ọ bụla ka na-eche ihe kpatara ihe pụrụ iche, Jose Mourinho, nwetara Carlos Vinicius. Eziokwu bụ, e nwere ọtụtụ ihe na Brazil ọkpụkpọ nwere ọtụtụ ihe karịa ihe na-ezute anya. N’enyeghi otutu nsogbu, ka anyị gaa n’iru banyere akụkọ nwata.
Carlos Vinicius Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido ebido, ọ na-aza aha zuru oke Carlos Vinicius Alves Morais na aha otutu 'V95'. A mụrụ onye Brazil na 25th nke March 1995 na Bom Jesus das Selvas, nke dị na steeti Maranhao, Brazil. Carlos Vinicius bụ ọkpara nke ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya.
Mgbe a mụrụ ya, nwa okoro ahụ yiri onye nwere mmụọ na ume siri ike. Ọ dị ka ebumnuche ebumnuche ya maka ebumnuche bọọlụ. N'oge ahụ, Carlos Vinicius na ndị ọgbọ ya na-agbagharị mgbe niile na-enweghị ike ịchọta eziokwu nke nsogbu ndụ. O kwuru otu oge;
Oge m dị obere dị ka ụmụaka ndị ọzọ tụrụ anya ịbụ ọkachamara n’egwuregwu.
A mụrụ m n’otu obere obodo, mụ na ndị enyi m anọkarị, m na-anọkarị n’ọhịa na ala nkịtị. Ọ ga-amasị m ịga ụlọ akwụkwọ, mana ọ ga-amasị m ịgba bọl karịa. ”
Carlos Vinicius Ezigbo Ezinụlọ:
Iji gwa gị eziokwu, ndị Brazil enweghị ndụ okomoko nke ịnweta ngwa na-egbu maramara dịka nwatakịrị. Bụ onye amụrụ na ezinụlọ nke etiti na-egosi na ụlọ Carlos Vinicius nwere ike ị nweta naanị ihe ndị nne na nna ya hụrụ dị ka ihe dị mma maka nlanarị ezinụlọ.
N'agbanyeghị nke ahụ, nwatakịrị ahụ siri ike na-agụ Ndụ nwata ya dị ka mkpali dị ukwuu maka ihe ọ mechara rụchaa na ndụ. Ka o sina dị, anyị nwere obi ụtọ na mmalite nke oge ya adịghị egbochi ọrụ ọ rụzuru.
Carlos Vinicius Ezinụlọ:
Ọ dị ka onye ọkpụkpọ bọọlụ Brazil nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na ebe amụrụ ya. N'ezie, ezinụlọ Carlos Vinicius nwere ike ịchọta Bom Jesus das Selvas, Maranhao.
You Mara?… Maranhao bụ steeti dị na mgbago ugwu na Brazil a na-akpọ ala nkwụ. N'ikwu nke a, steeti na-ewepụta nnukwu ego ọ na-enweta site n'ụdị nkwụ dị iche iche dị na ala ya. Lelee anya ikuku nke Bom Jesus das Selvas- ebe ndị nne na nna Carlos Vinicius zụlitere ya.
Carlos Vinicius Football Akụkọ nke:
Njem nke onye na-eto eto nwere nkà malitere mgbe ọ dị afọ 14 mgbe ọ si na mpaghara ugwu nke Brazil malite ọrụ ya na Goias na mpaghara ọdịda anyanwụ. N'oge ahụ, Carlos Vinicius zụrụ azụ dị ka onye na-agbachitere etiti maka afọ abụọ tupu ọ kwaga Santos na 2011.
Mgbe ọ kwagara Santos, onye Brazil ahụ etinyeghị oge dị ukwuu na klọb ahụ tupu mbinye ego ya na-agaghị akwụ ụgwọ na Desportivo Brasil. Nke nta nke nta, Carlos Vinicius na-aga n'ihu na-emeziwanye nkà na ahụmịhe na klọb ọhụrụ ya. N'oge na-adịghị anya, ọ sonyere Palmeiras ebe ọ gụchara ntorobịa ya na 2015.
Carlos Vinicius Ndụ Ndụ Mmalite:
Obere otu afọ mgbe ọ gụsịrị ọzụzụ ntorobịa ya na Palmeiras, Vinicius hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ ka ọ sonyere Caldense. N'ụzọ dị mwute, ọ pụtaghị Caldense ọ bụla ruo n'afọ na-esote mgbe ọ sonyeere ha.
N'ihi ndidi na ntachi obi ya, onye Brazil mesịrị nwee oge igwu egwu maka ụlọ ọrụ ọhụrụ ya. N'ihi ya, o mere ọkachamara ọkachamara mbụ na 19th ụbọchị nke March 2017 na mmeri 2-0 pụọ na Uberlandia.
Carlos Vinicius Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, oge mbụ nke ọrụ nke otu oge Defensive Midfielder ghọrọ onye na-adịghị mma. Eziokwu bu, o nwechaghi ohere igosi ihe ngosi football ya n'egwuregwu klọb. Los Carlos Vinicius mere naanị otu onye anya na Caldense mgbe ya na klọb nọrọ ihe karịrị otu afọ.
Agbanyeghị, ọdachi ya gbanwere ka ọ hapụrụ Caldense maka Gremio Anapolis ọnwa abụọ ka ọ gwụchara ọrụ ya. Ọ bụ ezie na ọ mere naanị ihu abụọ maka Gremio, Carlo Vinicius gbanwere site na igwu egwu dị ka etiti azụ na ọgụ ọgụ.
Carlos Vinicius Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
N'ihe banyere ịgbanwee n'ihu, onye Brazil malitere itinye nnukwu ihe mgbaru ọsọ - ihe na-amasị ụfọdụ ndị Portuguese Portuguese. Maka nke a, ndị nne na nna Carlos Vinicius na ndị ezinụlọ ha maara na nke ha bụ naanị izu ole na ole ịhapụ ha gaa Europe.
Na 5 July 2017, Carlos Vinícius, hapụrụ onye ọ bụla ọ hụrụ n'anya azụ n'ụlọ maka ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ na Portugal. Site na egwuregwu mbụ ya, ọ malitere nyocha - ihe mgbaru ọsọ 19 na oge mbụ ya na Real SC - ụlọ ọgbakọ Portuguese.
Dị ka ọtụtụ ndị na-eto eto, ọ kwụrụ ụgwọ ọrụ ya site na ịga mbinye ego- nke mbụ wee gbanwee na Napoli. Mgbe Carlos nwesịrị ahụmịhe ahụ chọrọ, ọ mechara biri na Benfica ebe o mere ka aha ya dị ka onye na-eme egwuregwu. Ihe mgbaru ọsọ 18 ya na 8 nyere aka nyere ndị Portuguese aka inweta 2019 Supertaça Cândido de Oliveira.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Carlos Vinicius kụrụ jackpot dị ka ihe mgbaru ọsọ ya dị ịrịba ama na-egosi na Spurs bịanyere aka na ya na October 2020. Obi abụọ adịghị ya, ọ na-enwe obi ụtọ iso ụmụnne ibe ya Suchdị Alex, Allan Loureiro kwuru na Gabriel Magalhaes na ihe ịga nke ọma EPL ha.
Na nkenke, ndị Spurs na-achọ ịhụ nwa na-eto eto na-eto eto na klaasị ụwa n'ihu anya ha. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Banyere nwunye Carlos Vinicius, Caroline:
Dị ka onye Brazil na-agbalịsi ike ịnọgide na-arụ ọrụ dị mma na football, ọ na-elekwa anya maka nguzozi na ndụ mmekọrịta ya. Dị ka Matheus Pereira, Carlos lụrụ n'oge - otu nwanyị mara mma aha ya bụ Caroline. Akụkọ ịhụnanya ha karịrị nke a na-enweta na opera ncha.
Carlos Vinicius na-ahụ nwunye ya dị ka ogidi ya, onye ya na ya nọ na ya n'oge. Dabere na M-NewsUK na ya n'ime akụkọ, Carol nyere di ya ndụmọdụ ka ọ ghara ịkwụsị igwu egwu n'oge ọ kpatara ihe na-erughị £ 200 dị ka onye ọkpụkpọ kachasị elu na 2017. Iji kwuo eziokwu, ọ kwụsịla, ọ nweghị ụzọ ndị na-egwu Portuguese ga-esi hụ ya.
Carlos Vinicius Childrenmụaka:
N'oge itinye Bio a, alụmdi na nwunye dị n'etiti CC - Carlos na Caroline gọziri ụmụ abụọ mara mma. N'ezie, Carlos Vinicius nwere nwa nwoke na nwa nwanyị ọ hụrụ n'anya nke ukwuu. N'ezie, okwu enweghị ike igosipụta ịhụnanya ya na nwunye ya nwere maka ụmụ ha. Lelee ụmụaka ya mara mma anya.
Carlos Vinicius Ndụ Nke Onwe:
Ewezuga ịgba mbọ bọọlụ ya, onye ọkpụkpọ bọọlụ Brazil kwupụtara okwu ya. N'ezie, ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu ole na ole nwere ezigbo nkwurịta okwu. Eziokwu bụ, Carlos Vinicius na-adịkarị mfe ịkọwa ọ rịgoro site na ahihia rue amara na Life Life.
Obi abụọ adịghịkwa na onye na-egwu egwu na-ebuso ndị mmadụ ụzọ emeela ngosipụta nke àgwà zodiac Aries. Mmasị ya, obi ike ya, na ume ọ ga-eji mee nke ọma enweghị ọtụtụ ndị ọgbọ ya.
Ka a sịkwa ihe mere na ọ daghị mbà na football, ọbụlagodi mgbe ego ya na-akwụ kwa ọnwa erughị £ 200 na Gremio Anapolis. Obi dị anyị ụtọ na ndị mụrụ ya na ndị ezinụlọ ya na-enwezi obi ụtọ ugbu a maka ihe ọ ghọrọ. Naanị lee ka o si nwee obi ike- na echiche na- Obi dị m ụtọ na m mere ya na ndụ n'ihi na nwunye m na ezinụlọ.
Ndụ Carlos Vinicius:
Maka onye ọkpụkpọ nke nwetara meteoric Rise to Fame, ọ bụ ihe ziri ezi na ọ na-enwe ndụ okomoko ọ kwesịrị. Otú ọ dị, Vinicius adịghị enweta obi ụtọ n'ịkọwa ụlọ ya ndị mara mma na ụgbọala ndị mara mma na mgbasa ozi. N'ikwu eziokwu ọ bụla, ọ na-ahọrọ idebe akụ ya na nzuzo.
N'agbanyeghị nke ahụ, onye ọkpụkpọ Tottenham hụrụ n'anya ịga ije n'okporo ụzọ dịpụrụ adịpụ iji nwee ọmarịcha ọhụụ. Moreso, ọ hụrụ n'anya iso ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa n'akụkụ osimiri na osimiri. N'okpuru ebe a bụ ntakịrị ọhụụ nke Carlos Vinicius Web.
Obi abụọ adịghị ya na Carlos Vinicius Salary abawanyela kemgbe ọ sonyere Lucas Moura na Tottenham. Dabere na So-FIFA, onye Brazil na-akwụ ụgwọ ọnwa kwa izu nke, 84,321. Ọzọkwa, o nwere ọnụ ahịa ahịa ahịa nke £ 15,414 n'oge a na-ede Biography.
Carlos Vinicius Ndụ Ezinụlọ:
Kwere ma ọ bụ na ọ bụghị, Forward na ezinụlọ ya nwere mmekọrịta chiri anya. Gụọ ka anyị na-ewetara gị ozi gbasara ndị nne na nna Carlos Vinicius na onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ ya.
Banyere Carlos Vinicius Nne:
Dị ka nwa nwoke nne ya mụrụ, ọ bụ ụkpụrụ na Vinicius nwere ike ịbụ nwa nwoke mummy. N'ụzọ dị mwute, mama ya nwụrụ na-egwu egwuregwu ahụ afọ ole na ole tupu ọ ghọọ onye a ma ama. Foto dị n'okpuru bụ Carlos Vinicius, nne nwụrụ anwụ.
Mgbe ọ na-akọ akụkọ ndụ ya gbanwere, Carlos Vinicius kwupụtara akwa ụta ya na nne ya adịghị ndụ iji mee ọganiihu ya. O mere ihe ederede na Instagram ya nke kwuru;
“Mama, ị bụ onye ga - abụ onye kacha mkpa ná ndụ m. Ama m na ị ga-anọnyere m oge niile, n’ime obi m, na-ele m anya ma na-echekwa m n’eluigwe.
Mana a ga-enwe nnukwu oghere nke ọnụnọ gị na ndụ m. Agaghị m anụ olu gị, ịgwa gị okwu, ịmakụ gị. ”
Banyere Carlos Vinicius Nna:
O juru anyi anya na onye Brazil ekwughi nna ya n’oge ufodu na Bio. Agbanyeghị, nyocha nwere na Carlos Vinicius tolitere na nna nna ya na nne mụrụ ya. N'ụzọ dị mwute, amabeghị ma nna ya ọ nwụrụ n'oge mbụ ya ma ọ bụ na ndị mụrụ ya gbara alụkwaghịm n'oge ahụ.
Banyere ụmụnne Carlos Vinicius:
Site na nyocha siri ike anyị mere banyere ezinụlọ ya, anyị chọpụtara na onye ọkpụkpọ ume nwere naanị otu nwanne nwanyị. Kaosinadị, aha nwanne ya nwanyị, onye pụtara dịka nwanne ya nwoke nke obere, bụụrụ ihe omimi nye mmadụ niile. Enwere obere ihe ederede banyere ịdị adị nwanne.
Banyere ndị Carlos Vinicius:
N'etiti nne na nna ya na nne nne ya, Carlos ekpughela naanị foto nne nne ya. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, Carlos Vinicius anọwo na-eguzosi ike n'ihe nye ezinụlọ ya (gụnyere nne na nna ya na nwanne nne ya) ọbụna tupu ọ ghọọ onye a ma ama.
Carlos Vinicius Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie Carlos Vinicius Life Story, lee ihe ole na ole ga - enyere gị aka ịghọta akụkọ banyere Biography.
Eziokwu nke 1: Onye na-agbachitere ahụ hapụrụ ya ọnya:
Ị maara?… Jan Vertonghen si esemokwu na Carlos ahapụla akara na ụkwụ ya, ihe ngosi nke akpọrọ onye Belgium dị ka onye nchebe kachasị njọ ọ nwetụrụla. Nke a bụ mkpughe na-awụ akpata oyi n'ahụ nke a- vidiyo n'oge ahụike Spurs ya.
Eziokwu nke 2: Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na ihe ọ na-eme kwa nke abụọ:
Kwa Afọ £ 4,391,438
kwa ọnwa £ 365,953
Kwa Izu £ 84,321
Kwa .bọchị £ 12,046
Kwa elekere £ 502
Kwa Nkeji £ 8.4
Anyị enyochapụtala ụgwọ ọrụ Carlos Vinicius dị ka elekere anya. Hụ n'onwe gị ego onye Brazil riterela kemgbe ị bịara ebe a.
Nke a bụ ihe Carlos Vinicius akwụla ụgwọ kemgbe ị malitere ile Bio.
Eziokwu nke 3: Carlos Vinicius Okpukpe:
Dị ka Kaka, ndị mụrụ ya zụlitere ya ịbụ ezigbo Onye Kraịst. Moreso, o jidere okwukwe ya wee nwee obi ike ma kwere na amara na-adịghị ada ada nke Chineke site n'aka nwa ya nwoke bụ Jizọs Kraịst. N'ihe ka ukwuu na post Instagram ya, Vinicius ejikọtala ihe ọ na-ede na ụkpụrụ Ndị Kraịst nke na-ekwu okwu ọma banyere nkwenkwe okpukpe ya.
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na onye Brazil na-aga n’elu ikpo okwu ịkọrọ okwu Chineke n’ọgbakọ nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi. Lelee otu ọnọdụ mgbe bọọlụ ozioma nke amụrụ bọọlụ na-ekwu maka Jizọs.
Eziokwu nke 4: FIFA profaịlụ:
Nyocha nke egosiri na ya NT-FIFA ọnụego gosipụtara na Carlos Vinicius adịla n'okpuru-akara tupu ya ebili. Obi dị m ụtọ, ịkwaga ya Jose Mourinho Ndị agha ga-enye ya ohere igosipụta ike ịgba bọọlụ ya. Chọta n'okpuru stats ya nke kwesịrị ịkwalite n'oge na-adịghị anya.
Carlos Vinicius Biography nchịkọta:
Aha n'uju: Carlos Vinicius Alves Morais
Aha Nick: V95
Age: Afọ 25 (dika nke Ọktoba, 2020).
Ụbọchị ọmụmụ: 25th March 1995
Ebe amụrụ onye: Bom Jesus das Selvas, Brazil
Children: Kidsmụaka abụọ (Otu okenye nwoke na nwatakịrị nwanyị)
Rygwọ ọnwa kwa afọ £ 4,391,438
elu: 1.9m (6 ′ 3 ″)
Eziokwu nke 5: Ihe kpatara aha otutu:
Dịka aha nnabata, Vinícius họọrọ V95 dịka Cristiano Ronaldo si CR7. Akwụkwọ ozi nke V na-anọchite Vinícius. Mgbe 95 na-anọchite ọnụ ọgụgụ nke uwe elu ọ na-eyi n'oge ọrụ mbụ ya. Ihe ọchị zuru oke, ọ nakweere nọmba 95 site na ụbọchị ọmụmụ ya.
Na nchikota, akụkọ anyi banyere Carlos Vinicius na-echetara anyị na ndị mmeri anaghị akwụsị akwụsị, ndị na-agbapụ akwụsịghịkwa emeri. Onye Brazil ahụ hụrụ ihe mgbochi mgbe ọ bụ onye na-agbachitere ya. Ọ dịghị mgbe ọ kwụsịrị ma gbanwee gaa n'ihu bụ otu n'ime ihe ndị ahụ gbanwere akụkọ ya.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime ndị mere ya n'etiti ndepụta nke ndị na-agba ọsọ Brazil si na ezinụlọ na-enweghị ego. Obi dị m ụtọ na ọ na-enweta nkasi obi ugbu a na nwunye ya Carol mgbe mgbu nke ọnwụ nne ma ọ bụ nna (mama ya) - onye ndụmọdụ mbụ ya. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ogidi nke ihe ịga nke ọma ya.